Single-Task လုပ်နည်း | Martech Zone
သောကြာနေ့, သြဂုတ်လ 28, 2009 Douglas Karr
လူတိုင်းကဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောကြတယ်။ မနေ့ကငါက David နဲ့စကားပြောခဲ့တယ် ဘရောင်းကောင်တီအလုပ်ရှာဖွေရေးအရင်းအမြစ် စင်တာနှင့်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြသည် Single-tasking။ ဆိုလိုသည်မှာ ... သင်၏ဖုန်း၊ twitter desktop app ကိုပိတ်ခြင်း၊ သင်၏အီးမေးလ်ကိုပိတ်ခြင်း၊ သတိပေးချက်များကိုပိတ်ခြင်းနှင့်အချို့သောအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း။
ငါ Multi- tasking ၏ပရိတ်သတ်မဟုတ်ပါဘူး။ ယခင်အလုပ်များမှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကကျွန်ုပ်သည်ခေါင်းဆောင်မှုချို့တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသက်သေထူလိမ့်မည်။ ငါထောင့်ကိုရှာချင်, ငါလုပ်နေတာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့် execute ကြိုက်တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံသူတို့သည်ကျွန်ုပ်ထံချဉ်း ကပ်၍ အခြားစီမံကိန်းတစ်ခုကိုဆွေးနွေးကြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူတို့ကိုပင်ဖုတ်ကောင်ကဲ့သို့ကြည့်ရှုသည်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုပင်မေးခွန်းတစ်ခုမေးသည်ကိုမမှတ်မိပါ။
ငါ့သမီးကဒါကိုချစ်တယ်။ စကားမစပ် ... ပုံမှန်အားဖြင့်သူမကငါမပြောချင်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းတဲ့အခါများသောအားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ 🙂
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ... စမ်းကြည့်ပါ! သင့်တွင် BlackBerry တစ်ခုရှိပါက၎င်းကိုအသံတိတ် (ဖွင့်မဟုတ်) ဖွင့်ပြီးစားပွဲပေါ်သို့လှည့်ပါ။ မက်ဆေ့ခ်ျအသစ်တစ်ခုရောက်သောအခါမျက်နှာ၏အလင်းကိုသင်မမြင်နိုင်ပါ။ သင်အစည်းအဝေးတက်နေပါကသင်၏ဖုန်းကိုသင်၏စားပွဲခုံ၌ ထား၍ အစည်းအဝေးကိုအာရုံစိုက်ပါ။ သင့်တွင်အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင်အမှုဆောင်အရာရှိတစ် ဦး ရှိပါကထိုအစည်းအဝေးသည်သင်၏စီးပွားရေးကိုဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ ကုန်ကျနိုင်သည်။ ဖုန်းကိုချပြီးအလုပ်ပြီးအောင်လုပ်!
လာမယ့်အပတ်မှာစမ်းကြည့်ပါ။ တနင်္လာနေ့မှာပြက္ခဒိန်ပေါ်မှာ ၂ နာရီမှ ၃ နာရီလောက်ပိတ်ထားပါ။ သင်လုပ်ဆောင်မည့်စီမံကိန်းကိုဆုံးဖြတ်ပါ။ သင်၏တံခါးကိုပိတ်ပါ၊ desktop သတိပေးချက်များအားလုံးကိုပိတ်ပါ၊ စတင်ပါ။ သင်မည်မျှအလုပ်ပြီးမြောက်မည်ကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။
သြဂုတ်လ 28 ရက် 2009 ခုနှစ် 8:50 နာရီ
Single-tasking ကောင်းကောင်းလုပ်ချင်ရင် Bean Cup မှာ မင်းရဲ့အလုပ်ကို ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ အကြံဉာဏ်တစ်ခု မေ့သွားသလား။
သြဂုတ်လ 29 ရက် 2009 ခုနှစ် 12:31 နာရီ
၎င်းသည် Multi-tasking ၏ကမ္ဘာဖြစ်ပြီး၊ အလုပ်များစွာကိုတစ်ချိန်တည်းလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းရဲ့အမြင်တွေကို မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သြဂုတ် 30, 2009 မှာ 1: 16 AM
အရမ်းကောင်းတဲ့ အကြံညဏ်လေးပါ..ဒီနေ့ အိမ်စာနည်းနည်းလောက်စမ်းကြည့်နိုင်မယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် Emma Adams က ဘယ်ကလာလဲဆိုတာ ငါမြင်တယ်။ ဘလက်ဘယ်ရီကို စစ်စရာမလိုဘဲ အတန်းထဲမှာ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရမ်းကောင်းတဲ့ ပို့စ်ပါ..
စက်တင်ဘာ 1, 2009 မှာ 3: 22 AM
Doug… အလုပ်တစ်ခုတည်းအတွက် နည်းစနစ်ကောင်းတစ်ခုကို ရှာနေခဲ့ပြီး ကောင်းတဲ့တစ်ခုကို တွေ့ခဲ့တယ်… Pomodoro နည်းပညာကို သုံးပါတယ် ( http://www.pomodorotechnique.com/ ) တစ်ခုခုပြီးမြောက်ဖို့ အာရုံစိုက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အခါ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အစည်းအဝေးတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ မေရက်တွေမှာ မသုံးရဘူးထင်ရပေမယ့် လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိတဲ့အခါ အဲဒါက ငါတွေ့ထားတဲ့ အကောင်းဆုံး နည်းပညာပါပဲ… အခြေခံအားဖြင့်၊ Pomodoro ဟာ အလုပ်တစ်ခုအတွက် 25 မိနစ် အလုပ်ချိန်နဲ့5မိနစ် ချိုး၏။4pomodoros နဲ့ မင်း မိနစ် 30 လောက် အနားယူလိုက်ပါ... ဒီနည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး အများကြီး ပြီးသွားပါပြီ...။
8:2009 pm တွင်စက်တင်ဘာ 1, 21 မှာ
ဤပို့စ်ကောင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်ကို အမှန်တကယ် တွေးတောမိစေပါသည်… အလုပ်နေစဉ်တွင် အနှောင့်အယှက်များစွာကို လျှော့ချရန် TweetDeck နှင့် Digsby တွင် အသိပေးချက်များကို ပိတ်လိုက်ပါသည်။
14:2009 pm တွင်စက်တင်ဘာ 2, 42 မှာ
အလုပ်တစ်ခုတည်းကို အာရုံစိုက်ထားတဲ့အခါ မင်းက ဖုတ်ကောင်လိုပါပဲလို့ ပြောတာကို သဘောကျတယ်။ အကြောင်းကို ပို့စ်တစ်ခုရေးတယ်။ Zombies နှင့် Single-Taskning အနုပညာ.